Wareegyada Saturn: astaamaha, muhiimadda iyo daahfurnaanta | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 16/07/2021 10:00 | Astronomy
Saturn waa mid ka mid ah meerayaasha iska leh qorraxda waxayna ku dhex jirtaa kooxda meerayaasha gaaska leh. Waxay u taagan tahay inay lahaato siddooyin waana mid ka mid ah labada meere ee ugu waaweyn uguna caansan nidaamkayaga qorraxda. Si fudud ayaa looga daawan karaa dhulka mahadnaqa Giraanta Saturn.
Maqaalkani waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato siddooyinkii Saturn, sida ay u sameysmeen iyo astaamaha ay yihiin.
1 Meeraha siddooyinkiisa leh
3 Giraanta Saturn
4 Sahaminta siddooyinkii Saturn
Meeraha siddooyinkiisa leh
Saturn waa meere gaar ah. Saynisyahannada, waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah meerayaasha ugu xiisaha badan si ay u fahmaan dhammaan nidaamka qorraxda. Waxaa xusid mudan inay leedahay cufnaan aad uga hooseysa biyaha oo ay ka kooban tahay gebi ahaanba haydarojiin, oo leh qaddar yar oo ah helium iyo methane.
Waxay ka tirsan tahay qaybta meerayaasha gaaska weyn waxayna leedahay midab gaar ah oo ka dhigaya mid gaar ah. Waa waxoogaa huruud ah, oo isku dhafan xarigyo yaryar oo midabbo kale leh. Dad badan ayaa ku khaldama Jupiter, laakiin xiriir ma lahan. Waxay si cad u kala soocaan giraanta. Saynisyahannadu waxay u maleeyaan in siddooyinkoodu ay ka samaysan yihiin biyo, laakiin waxay u adag yihiin sida barafka, barafka, ama kubbadaha barafka qaarkood, gaar ahaan marka lagu daro noocyo ka mid ah boodhka kiimikada.
Waxaa ka mid ah astaamahan soo jiidashada leh ee Saturn ka dhigaya meeraha xiisaha leh, waa inaan sidoo kale iftiiminaa bilaha ay curiyaan. Illaa iyo hadda, 18 dayax gacmeed ayaa la aqoonsaday oo ay magacaabeen khubaro ku takhasusay cilmiga fiisigiska berrinka. Tani waxay siineysaa meeraha ahmiyad weyn iyo kala duwanaansho. Si aan si fiican u fahamno, waxaan soo qaadan doonaa qaar ka mid ah.
Kuwa ugu caansan waa kuwa loogu yeero Hyperion iyo Iapetus, kuwaas oo gebi ahaanba ka kooban biyo gudaha ku jira, laakiin aad u xoog badan oo loo maleynayo, siday u kala horreeyaan, in ay asal ahaan barafoobaan ama ay jiraan qaab baraf ah. Saturn waxay leedahay dayax gacmeedyo gudaha iyo dibaddaba ah. Qaab dhismeedka gudaha, midka ugu muhiimsan waa qaabdhismeedka gudaha ee meerayaasha loo yaqaan 'Titans' ay ku yaalliin. Waa mid ka mid ah dayax-gacmeedyada ugu waaweyn ee loo yaqaan 'Saturn', in kasta oo ay ku wareegsan tahay ceeryaan cufan oo cufan, ma sahlana in la arko.
Saturn waxay leedahay dayax gacmeedyo gudaha iyo dibaddaba ah. Qaab dhismeedka gudaha, midka ugu muhiimsan waa qaabdhismeedka gudaha ee meerayaasha loo yaqaan 'Titans' ay ku yaalliin. Waa mid ka mid ah dayax-gacmeedyada ugu waaweyn ee loo yaqaan 'Saturn', in kasta oo ay ku wareegsan tahay ceeryaan cufan oo cufan, ma sahlana in la arko. Dayax gacmeedka Titan waa mid ka mid ah dayax gacmeedyada asal ahaan ka kooban gebi ahaanba nitrogen.
Dayax gacmeedkan gudihiisa wuxuu ka kooban yahay dhagaxyo ka kooban walxo kiimiko ah sida kaarboon hydroxide iyo methane, kuwaas oo la mid ah meerayaasha caadiga ah. Tirada badiyaa waa isku mid, ugu badnaan waxay dhihi doonaan, xitaa haddii cabirku isku mid yahay.
Nidaamka giraanta Saturn wuxuu ugu horreyn ka kooban yahay biyo baraf ah iyo dhagaxyo soo dhacaya oo cabbirro kala duwan leh. Waxay u qaybsan yihiin laba qaybood, oo ay u kala baxaan "Qaybta Cassini": giraanta A (dibedda) iyo giraanta B (gudaha), marka loo eego ku dhowaanshaha dusha meeraha.
Magaca qaybta wuxuu ka yimid daahfure, Giovanni Cassini, oo ah muwaadin cirfiid Faransiis-Talyaani ah oo cilmi-baare ah oo helay kala-go'id dhan 4.800 kilomitir ballaadhan 1675. Kooxda B waxay ka kooban yihiin boqolaal siddo, qaar ka mid ah oo leh qaabab elliptical ah oo muujinaya isbeddellada ku yimaada cufnaanta mawjadda taasoo ay ugu wacan tahay isdhexgalka cufisjiidadka ka dhexeeya giraanyada iyo dayax gacmeedka.
Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira dhismayaal mugdi ah oo loo yaqaan "radial wedges" oo ku wareega meeraha xawaare ka duwan inta ka hartay qalabka giraanta (dhaqdhaqaaqooda waxaa gacanta ku haya aaladda magnetka meeraha).
Asalka cufnaanta shucaaca wali lama yaqaan waxayna u muuqan karaan oo tirtiri karaan qaab ahaan. Sida laga soo xigtay xogta ay heshay duulimaadkii dayax gacmeedka Cassini ee 2005, waxaa jira jawi ku wareegsan giraanta, oo ka kooban inta badan oksijiin molikal ah. Ilaa iyo 2015, aragtiyada ku saabsan sida loo sameeyay siddooyinkii Saturn ma sharxi karaan jiritaanka waxyaabo yaryar oo baraf ah.
Saynisyahan Robin Canup ayaa daabacay aragtideeda oo ahayd in markii uu dhashay nidaamka qoraxda, dayax gacmeed Saturn ah (oo ka kooban baraf iyo dhagax weyn) dhulka ku dhacay oo sababay isku dhac. Sidaa awgeed, jajabyo waawayn ayaa la soo saaray si ay u samaystaan ​​halo ama giraan qaybo kala duwan ah, kuwaas oo sii waday inay isku dhacaan markii ay safka meeraha u kala safnaayeen, ilaa ay soo saareen siddooyinkii waaweynaa ee maanta la yaqaan.
Sahaminta siddooyinkii Saturn
Sanadkii 1850-kii, cirbixiyeenka Edouard Roche wuxuu daraaseeyay saameynta culeyska meeraha uu ku leeyahay dayax gacmeedyadiisa wuxuuna xisaabiyay in arin kasta oo ka hooseysa 2,44 jeer gacan ka meeraha meeraha uusan iswaafajin karin sameynta shay oo haduu waligiis shay ahaan lahaa uu kala go’o. Giraanta Saturn ee gudaha C waa 1,28 jeer gacan iyo giraanta kore ee A waa 2,27 jeer gacan-yaraynta. Labaduba waxay kujiraan xuduudaha Roche, laakiin asalkooda wali lama cadeyn. Waxyaabaha ay ka kooban yihiin, ayaa lagu samayn karaa aag la mid ah cabirka dayaxa.
Qaab dhismeedka wanaagsan ee giraanta waxaa asal ahaan loo aaneeyey culeyska satellites-ka u dhow iyo xoogga bartamaha ee ka dhashay wareegga Saturn. Si kastaba ha noqotee, baaritaanka Voyager wuxuu helay dhismayaal mugdi ah oo aan lagu sharixi karin sidan. Qaab dhismeedyadan waxay ku wareegayaan giraanta xawaare la mid ah kan magnetosphere meeraha, si ay ula falgalaan birlabteeda birlabta.
Qaybaha ay ka kooban yihiin giraanta Saturn way kala duwan yihiin cabbir ahaan, laga soo bilaabo qaybaha microscopic-ka illaa qaybo waaweyn, oo guriga u eg. Waqti ka dib, waxay soo ururin doonaan hadhaagii majaajillada iyo xiddigiska. Inta badan waxyaabaha iyaga sameeyaa waa baraf. Hadday aad u gaboobeen, waxay isu beddelayaan madow sababo la xiriira boodh. Xaqiiqda ah inay dhalaalayaan waxay muujinaysaa inay da ’yar yihiin.
In 2006, dayax gacmeedka Cassini wuxuu helay giraan cusub intaad ku safrayso hooska qorrax ka soo horjeedka qorraxda. Solar occultation waxay u oggolaaneysaa ogaanshaha jajabyada aan sida caadiga ah u muuqan. Faraantiga u dhexeeya F iyo G wuxuu ku soo beegmayaa meertooyinka Janus iyo Epimetheus, labadan dayax gacmeedyaduna waxay ku dhow yihiin inay wadaagaan meertooyinkooda oo ay si joogto ah u kala beddelaan. Waxaa laga yaabaa in meteors-ka isku dhaca dayax gacmeedyadan ay soo saari doonaan walxo sameysma giraan.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto siddooyinka Saturn iyo astaamahooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Giraanta Saturn